Puntland ayaa so martay Abaar aad u baaxad wayn, taasi oo galaafatay nolosha Xoolo badan, waxaa ku cayroobay Qoysas badan, halka ay jireen Cuduro ka dhashay iyo dad u dhintay Abaarta.
Mudadii ay jirtay Abaartu waxaa Jaaliyadaha reer Puntland iyo dadka guduhu ay aad isugu hawleen sidii ay dadkooda u caawin lahaayen, waxaana ay gaarsiiyeen Gurmadyo balaaran.
Baahida ugu wayn ee dadku ay qabeen waqtigaas ayaa ahayd biyo, waxaana inta badan deegaanada Puntland dadku ay tabayaan inay helaan biyo, waana mid ka mid ah baahiyaha Aasaasiga ah ee ka jira meelo badan.
Markii Roobabka Gu’ga ay da’een, ayaa waxaa Biyihii Roobku ay si isdaba joog ah u galeen Badda, mana jirto cid ka faa’iidaysatay.
Dawlada Puntland oo markii hore aan taageero wayn ka geysan Gurmadka Abaarta, ayaan haddana u samayn bulshada reer Puntland qorshayaal loogu horseedayo inay Biyaha Kaydsadaan, arrintaas oo dawlada si wayn loogu dhaliilay.
Biyaha Roobabka Gu’ga ee badda galay ayaa ahaa biyo aad u badan, kuwaas oo haddii laga faa’iidaysan lahaa wax badan qaban lahaa bulshada reer guuraga ah xilliyada ay Abaaruhu dhacaan.
Dawlada ayaa looga baahan yahay inay qorshayaasheeda ku darsato inay la timaado Barnaamij wax looga qabanyo biyaha Roobka ee sida isdaba jooga ah u khasaaraha, waana in bulshada si daacadnimo ku jirto wax loogu qabto.
Xukuumadda Puntland xafiiska looguma dhiibin inay furaha wareejiso marka waqtigeedu uu dhamaado ee waxa loogu dhiibay inay dalka iyo dadka wax u qabato.
Sawiradan waa magaalada Garowe oo kaliya Roob Saacado Hayay Biyaha uu dhigay oo aan laga faa’iidaysan;